शासन व्यवस्था आफैमा साध्य होईन, साधन मात्र हो । जुन कुरा पुष्टि समेत भईसकेको छ । यो सिद्धान्त सबैमा लागु हुन्छ, नेपालको सन्र्दभमा पनि लागु भईसकेको छ । राजनीति आफैमा पूर्ण हुदैन । नीतिको प्रधान राजनीति हो, तर यसको सफल कार्यन्वयनले मात्र राजनीतिको वास्तविक अर्थ पुरा हुन्छ । लामो राजनैतिक आन्दोलन र त्यसले प्राप्त गरेको संघिय गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गरिरहदाँ जनता सामु प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ त्यो हो, शासन व्यवस्थाले मात्र आम जनताको परिवर्तन गराउन सक्दछ र ? राजनैतिक नेतृत्वलाई यो विषय समान्य भएता पनि आम नागरिकलाई भने पेचिलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
अहिले नेकपामा एउटा जंगलमा दुई शेर बस्न सक्दैन भनेझै भएको छ । त्यहि आत्माघाती सोच नै नेकपाका लागी घातक बनिदियो । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक देशमा भएको कोरोना नियन्त्रणका लागि छलफल हुन सकेन, देशको राष्ट्रियता बनेन, जनजीविकाको सवाल बनेन, बन्यो त केवल सत्ता र शक्तिका लागी विवाद । जनता र राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्टिय स्तरमा चासोको विषय बनेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक कुर्सीमा समानता र शक्ति आर्जनका लागि युद्ध गर्ने मैदान बनिदियो । नेकपाका नेताहरुको यहि खुद्रे रवैयाले आम जनतामा कस्तो प्रभाव पारयो होला, नेकपाका नेतागणहरुले कदापी सोच्न सकेको पाईदैन । आम जनता के चाहन्छन, हैन, नेता के चाहन्छ भन्ने पुष्टि गरिदियो । देश र जनताको आवश्यकता के हो, आफुलाई कथित राष्टवादी सोच्ने नेतागणले कदापी सोच्न सकेन, सोच त रहयो केवल आफनो भूमिका कहाँ ? यहि नेतृत्व र नेताको सोचमा हामी हुकाँर पिट्दै देवत्वकरणमा लिप्त बनिरहेका छौ ।
नेकपा भित्रको अबको निकास के ? अव यो भन्दा बाहिर गएर सोच्ने हो भने देशले कहिल्यै स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । लामो समयसम्म आन्दोलन र जेलनेल भोगेका नेताहरु सधै सत्ता र शक्तिको चंगुलमा फस्दा देश सधै वन्धक बनिदियो । यहि फेरिफेरिमा नै अब नेकपाको बैठक केन्द्रित हुन जरुरी हुन आउँछ । ईतिहासमा नेताहरुले गरेको योगदान विगतमा नेताहरुले पटक–पटक अवसर र राजकिय सत्ता र शक्ति लिएर लिईसकेका छन् । अवसर पनि सदैव प्राप्त गर्ने वस्तु होईन । योगदानको कदर स्वरुप नेकपा भित्रका पहिलो पुस्ताका नेताहरु पटक पटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यहि नै अवको पहिलो पुस्तालाई न्याय हो । योगदानको उचित मुल्यांकन हुनुपर्दछ, तर त्यसो भन्दैमा काल नआउदाँसम्म पदमा रम्नेलाई मात्र न्याय सम्झने हो भने त्यो देश र जनताका लागी धोका शिवाय केहि हुन सक्दैन । त्यो लोकतन्त्र कदापी हुन सक्दैन ।
स्थापनाकाल देखि नै पार्टी अध्यक्षमा रहेको प्रचण्ड, लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वर्तमान अध्यक्ष ओली राज्यसत्तामा बसेर देश संचालन गरिसकेका छन् । अझै पनि यिनीहरु एकअर्काको त्यागको आशा गर्नु भनेको आफुमात्र सर्वेसर्वा भन्ने सोच शिवाय अन्य होईन । यहि सोचका बिचमा भएको नेकपाको अन्तरकलहको दीर्घकालिन समाधान भनेको अव यी नेताहरुले अभिभावक बनेर दोश्रो पुस्तामा नेतृत्व र पार्टी हस्तान्तरण र्ने अवको समाधान हो । नत्र त्याग र योगदानका नाममा सधै आफु मात्र सवल सोच्ने हो भने अहिले ओलीको राजीनामाले केहि समयका लागि राहत दिएता पनि यो दीर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन । किनकी जव एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दैन, सत्ता र शक्तिका लागी लडाई भई रहन्छ । नेकपा भित्रको अवको समस्या समाधान गर्नु भनेको युवा पुस्तामा नेतृत्व र सरकारको हस्तान्तरण नै हो । नत्र ओलीको ठाँउमा प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री वन्दैमा निकास हुन्छ भन्ने सोच्नु भनेको आफै नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मिथ्या सोच शिवाय अन्य केहि हुदैन ।
योगदान, त्याग र अनुभवलाई शेयर गर्दे अव ओली, माधव, प्रचण्ड र झलनाथ अव अभिभावक बन्नुको विकल्प छैन । किनकी यिनीहरुको उपादेयिता सकिसकेको छ । अव पनि पद र शक्ति मा आसिन हुन्छ भन्नु देश र जनतालाई वन्धक वनाउनु शिवाय अन्य केहि हुदैन । किनकी यी व्यक्तिहरु पटक पटक जनताको सामु जोखिईसकेका छन् र यिनीहरुको योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलता जनताले नजिकवाट नियाली सकेका छन् । लोकतन्त्रमा व्यक्ति होईन, पार्टी सर्वेसर्वा हुन्छ, पार्टीको निर्णय नै मान्य हुनुपर्दछ । तर बहुमत र अल्पमतका नाममा कोही व्यक्ति हावी हुनु खोज्नु भनेको अव उसको अस्तित्व समाप्त हुदैछ भन्नु हो । अत बहुमत देश र जनताका लागी हुनुपर्नेमा नेपालको राजनीतिमा शक्ति र सत्ताका लागि बनिदियो । यो भन्दा अभिसाप अरु के हुन सक्दछ ? जीवनका लागि सिद्धान्त हुनपर्नेमा शक्ति र सत्ताका लागि विधि, विधान को परिभाषा, यो भन्दा जनताका लागी धोका के हुन सक्दछ ?
सिद्धान्त र वैचारिक विषयमा समानता तर के का लागि अन्तरकलह ? पार्टीको विचार र सिद्धान्तमा छलफल गरौं । पार्टीको मार्गदर्शन तय गरौ, कार्यतालिका तय गरौ र महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वको चयन गरौं, त्यहि नेतृत्वले नै नेकपाका सबै समस्यालाई समाधान गर्न सक्दछ । नत्र ओलीको स्थानमा माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड स्थानान्तरण हुँदैमा नेकपाको विवाद समाधान होईन, झन बढ्नेमा शंका छैन । अत अहिले ओलीलाई हटाएर राज गर्ने कसैले सोचेका छन् भने त्यो त्यसको दिवासपना शिवाय अन्य केहि हुँदैन । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट जर्वजस्ती हट्नु परेपछि ओलीले के माधव वा प्रचण्डलाई सजिलै काम गर्न देलान र ? ओलीले त्यसको बदला लिन पद र कुर्सी छाडेको भोलिपल्ट देखि नै हिसाव किताव गर्ने थाल्नेछ । ओलीको त्यो हिसाव किताबले माधव, झलनाथ र प्रचण्डको राजनीतिक जीवनमा साह्रै महँङ्गो पर्न सक्छ ।
अतः नेकपा देश र जनताका लागी काम गर्ने पार्टी हो भनेर जनजनमा बस्नका लागि अवको विकल्प भनेको ओली, माधव, प्रचण्ड र झलनाथ कार्यकारी पदमा नबसी पार्टीको सल्लाहाकार र अभिभावक बनेर दोस्रो पुस्तामा पार्टी र र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण नै अहिलेको आवश्यकता हो । यो सब बुझेर पनि बुझ्ने प्रयत्न नगरि सत्ता र शक्तिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने जनताले सधै काँध थाप्न सक्दैन । त्यो थाप्न नसकेको जनताको काँधबाट पछारिएको नेताहरु कहिल्यै उठ्न सक्दैन । अतः केहि समयसम्म ओलीको निरन्तरता र महाधिवेशन अथवा सहमतिवाट नै दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण नै नेकपाका लागि दीर्घकालिन समाधान हुन सक्दछ । के पहिलो पुस्ताले देश र जनताका लागि यो त्याग गर्न सक्लान् ? देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारिता अब देखाउने बेला भएको छ ।